सिनेमा Archives - नागरिक रैबार
रमित ढुंगानाका गुरु राजेश हमाल
काठमाडौं – अभिनेता रमित ढुंगानाले महानायक राजेश हमाललाई आफूले गुरु मान्ने बताएका छन् । आइतवार काठमाडौंमा आफ्नो जन्मदिन मनाउने क्रममा उनले राजेश हमाललाई दाइ र गुरु भनी सम्मान दिने गरेको बताए । जन्मदिनको माहोलमा रमितलाई पत्रकारले प्रश्न राखे – तपाईंको उमेर कति पुग्यो? रमितले पनि मजाकका साथ भने – अब हाम्रो गुरु बल्ल २५ वर्ष […]
काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको विधा हो, ‘कमेडी’ । हरकोही निर्माता कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो फिल्ममा कमेडी पस्किरहेका छन् । फिल्मभित्र एक्सन, एडभेन्चर र कमेडी संसारभर सबैभन्दा बढी चलेका विधा हुन् । यीबाहेक क्राइम, ड्रामा, फेन्टासी, हरर विधाका फिल्म पनि बन्ने गरेका छन् । संसारभरका दर्शकलाई हेर्ने हो भने युरोपेलीहरू […]
बैशाख २२, २०७६ बलिउडका दुई सुपरस्टार शाहरुख खान र सलमान खानबीच कहिले सम्बन्ध सुध्रिएको त कहिले विग्रिएका खबरहरु आइरहेका हुन्छन् । अहिले भने यी दुईको मित्रता उदाहरण दिन योग्य छ । यस्तैमा एक प्रश्न वर्षैदेखि सबैको दिमागमा आइरहेको छ, यी दुईमा नम्बर वान को हो ? कसको फ्यान फलोइंग सबैभन्दा धेरै छ ? फिल्म र […]
बैशाख २२, २०७६ तेलगु फिल्म इन्डष्ट्रीका चर्चित अभिनेता, जो विना तेलगु फिल्म जगतलाई अधुरो सम्झिने गरिन्छ – महेश बाबू । सन् १९७५ अगष्ट ९ मा चेन्नई, तमिलनाडुमा जन्मिएका उनको फिल्मी सफर बाल्यकालदेखि नै सुरु भएको थियो । तर, उनलाई २००३ मा आएको ‘ओकाडू’ बाट सफलता मिल्यो, जसमा उनले कबड्डी प्लेयरको भूमिका निर्वाहा गरेका थिए । […]
बैशाख २२, २०७६ वर्षको अन्तमा रिलिजमा आएर पनि सुपरहिट व्यापार गर्न सफल फिल्म ए मेरो हजुर–३ ले बुधबार राजधानीको होटल अन्नपूर्णमा सक्सेस पार्टी सेलिब्रेसन गरेको छ। गत चैत २९ गते अल नेपाल रिलिजमा आएको फिल्म ए मेरो हजुर–३ ले डेब्यु नायिका सुहाना थापाको जन्मदिनको अवसर पारेर फिल्मको सक्सेस पार्टी सेलिब्रेसन गरेको हो। फिल्मले करिब एक […]
एउटा फिल्म चलेपछि हेलचक्राई हुन्छ र ?
बैशाख २२, २०७६ छक्का पन्जा ले नेपाली फिल्मको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड तोड्यो । नयाँ रेकर्डले दिपकराज गिरी, दिपाश्री निरौलालाई नयाँ खुशी दियो । फिल्मको खुशीमा उनीहरु रमाए, खुशी हुँदा जल्नेहरु पनि कम थिएनन् । दिपकराज गिरी र दिपाश्री निरौला अनी उनीहरुको समुहले छक्का पन्जा २ बनायो । तर, फिल्मले आलोचना ठूलो भोग्यो । फिल्ममा त्रुटीहरु […]
बैशाख २२, २०७६ हरेक वर्षको इदमा सलमान खानको फिल्म रिलिज हुने गर्दछ । यो थाहा हुदा-हुदै पनि रोहित सेट्टी र अक्षय कुमारले फिल्म ‘सूर्यवंशी’लाई २०२० को इदमा रिलिज गर्ने भएका छन् । उनिहरुले पहिला देखिनै इदलाई कब्जा गर्यो भने सलमानले आफ्नो कुनै पनि फिल्मलाई इदमा ल्याउदैनन भन्ने सोचेर इदमा रिलिज घोषणा गरेका हुन । २०१९ […]
फिल्म फ्लपका फ्लप, डिमान्ड दुई लाख
बैशाख २२, २०७६ नम्रता श्रेष्ठले दुई लाख पारिश्रमिक डिमान्ड गरेको खबर छ । यसो हुँदा निर्माताहरुका लागि खुसीको खबर बन्न सक्थ्यो, यो रकम । हो, उनले पैसा त त्यति नै मागेकी हुन् तर फिल्मका लागि हैन, म्युजिक भिडियोका लागि । हालसालै बजारमा चलेको हल्ला अनुसार उनले म्युजिक भिडियोमा अभिनयको प्रस्ताव लिएर गएका एक गायकलाई दुई […]
०३ बैशाख बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पनि यौन शोषणको शिकार बनेकी खबर बाहिरिएको छ । उनी हालै न्यूयोर्कमा भएको १० औँ वार्षिक महिला सम्मेलनमा सहभागि भएकी थिइन् । जसमा उनले यौन उत्पीडन भएको बनाएकी छन् । उक्त सम्मेलनमा चोपडाले यस विषयमा बोल्न कोही पनि लजाउन नहुने बताइन् । महिला सम्मेलनमा विश्वभरबाट सहभागि भएका महिलाहरुले महत्वपूर्ण […]
अमेरिका जाने चक्करको ‘दाल, भात, तरकारी’ को ट्रेलर आउट
काठमाडौं– प्रतीक्षित फिल्म ‘दाल, भात, तरकारी’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । जम्बो चर्चित कलाकारहरुको अभिनय रहेको यो फिल्मको ट्रेलरलाई युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको हो । सुदन केसीको डेब्यु निर्देशन रहेको यो फिल्ममा हरिवंश आचार्य, निरुता सिंह, पुष्प खड्का, राजाराम दाहाल, आँचल शर्मा, वर्षा राउत, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, बसुन्धरा भुसाल, जयनन्द लामा लगायतका कलाकारको अभिनय छ । […]